Ikike asọmpi iji tinye ndị ọrụ KPSS n'ọrụ | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụIkike asọmpi iji were ndị ọrụ KPSS nweta ndị ọrụ
Ikike asọmpi iji were ndị ọrụ KPSS nweta ndị ọrụ
12 / 03 / 2020 Ọrụ, General
institutionlọ asọmpi ga-eme ndị odeakwụkwọ akara akara kpss
N'ime usoro nke asọmpi Authority Iwu Ahụike Ndị Ọrụ ga-arụ ọrụ na Asọmpi Asọmpi ahụ;
1) Maka (mmadụ iri) ndị ọrụ enyemaka nnyemaka asọmpi (General); Site na ngalaba nke Economics, Science ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Business Business, Economics na Administrative Sciences ma ọ bụ Nlekọta injinia ma ọ bụ ngalaba injinịa ụlọ ọrụ nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị elu na-enye afọ anọ agụmakwụkwọ,
2) Maka (mmadụ ise) ndị ọrụ enyemaka na-ahụ maka asọmpi (Iwu); Site na ikike iwu,
3) Maka (mmadụ 5) ndị ọrụ enyemaka nnyemaaka nke egwuregwu (IT); Injinia Kọmputa, Statistics na Kọmputa, Mgbakọ na kọọmọnụ, Injinịa Injinia, Igwe ọkụ eletriki, kọmịkịkị na nkwukọrịta, ngalaba injinịa.
Aga-akpọrọ ndị enyemaka ga-eso n'asọmpi asọmpi a n'ihi ule nnabata, nke ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mmụta ụlọ ma ọ bụ nke mba ọzọ ga-anabata na Councillọ Akwụkwọ Mmụta Kasị Elu nabatara.
2017 YGS Akara
TÜVASAŞ KPSS bụ onye na-eje ozi na ihe kachasị 70
KPSS 2017 / 2 Mmasị TCDD 573 Agụmakwụkwọ Njikwa Ọrụ na Ngwa Ngwa
TCDD 704 Officer Ịzụcha! KPSS 2017 / 2 Center Assignment
Turkey Writing Works Agency Staff ka ịzụrụ
Redlọ Ọrụ Nkwuputa Ndị Turkey Maka Ọrụ Ndị Ọrụ
Nkwupụta nke Onye Ọchịchị na-ahụ maka ọkwa nke KPSS 2017-1 maka ndị ebiri na TÜLOMSAŞ
Ọkwa ọkwa nchụpụ nke TCDD! KPSS 2019 / 1
Ọ bụ TÜVASAŞ ụlọ ahịa nrụzi ma ọ bụ asọmpi na ụwa?
Nnukwu asọmpi n'etiti BUDO na IDO gara n'iru
TCDD ga - azụta ihe na KPSS 2017-1 maka ndị okike?
TCDD ga - anata 356 ndị ọrụ na-enweghị KPSS chọrọ
TCDD ga - eme ka ọrụ ndị ọrụ 356 na-enweghị KPSS chọrọ!
İmamoğlu na-enyocha ntụle ọcha nke IETT na saịtị